Podcasting na-aga n'ihu na-eto eto na ịnwe ego | Martech Zone
Anyị nwere banyere 4 nde downloads nke 200+ ngosipụta nke anyị ahịa Podcast ruo taa, ọ ka na-eto. Nke ukwuu nke mere na anyị nyekwara anyị Podcast studio. M n'ezie na imewe n'ụzọ nke a ọhụrụ studio na m nwere ike na-akwaga n'ụlọ m ebe ọ bụ na m na-ahụ onwe m ma na-ekere òkè ma ọ bụ na-agba ọsọ ọtụtụ pọdkastị.
Site na mmalite dị ala ya na 2003, pọdkastị aghọrọla ike na - enweghị ike ịkwụsị ahịa ahịa yana ọ nweghị ihe ịrịba ama nke ịkwụsị - ọnụọgụ pọdkastị na - arụ ọrụ arịgoro kamgbe 2008. Jon Nastor
2018 Pọdkastị Statistics
Podcast na-ege ntị na nkezi nke ngosi 7 kwa izu, nke bụ 40% kemgbe 2017
Enwere pọdkastị 550,000 na-arụsi ọrụ ike n'ihe karịrị asụsụ 100 nwere nde ngosi 18.5 dị n'ịntanetị
5dị XNUMX kachasị nke pọdkastị bụ ọha na eze & ọdịbendị, azụmaahịa, ihe ọchị, akụkọ & ọchịchị, yana ahụike
64% nke ndị bi na United States maara okwu a Podcasting
44% nke ndị bi na United States egela ntị na pọdkastị, 26% na-ege ntị pọdkastị kwa ọnwa, 17% kwa izu, yana 6% nwere mmasị na fans
Igwe mmadụ bụ isi maka pọdkastị bụ afọ 25-34, ọ na-abụkarị igwe mmadụ siri ike iji nweta mgbasa ozi
Podcast na-ege ntị bụ 45% nwere ike ịnwe akara kọleji na 37% nwere ike ịnwe ego kwa afọ nke $ 100,000 ma ọ bụ karịa
Kedu ihe na-agbanwe na Pọdkastị a ma ama?
Laa azụ afọ ole na ole na na-eri pọdkastị bụ ọrụ dị mgbagwoju anya. Ọ bụrụ n’inwere ngwaọrụ iOS, ị ga-akụrịrị mekọrịta ya na iTunes gakọrịta mgbe ị debanyere aha na pọdkastị ị masịrị. Otú ọ dị, dị ka ngwaọrụ nwere ọganihu na njikọta brọdband aghọwo ebe nkịtị, gụgharia pọdkastị aghọwo ụkpụrụ. Apple nwere ngwa pọdkastị, na e nwekwara Stitcher, TuneIn, BlogTalkRadio, na ngwa ọdịnala nwere ike ijikọ egwuregwu n'ụzọ dị mfe.
E wezụga na-ege ntị n'oge gị n'ụtụtụ jog ma ọ bụ n'ehihie ịnyịnya ígwè, enweghị nkebi mwekota nke smartphones na ụgbọala mere ka Podcast na-ege ntị a kwesịrị na gị n'ụtụtụ na n'ehihie commutes. N'uche m, ekwenyere m na nke a bụ mpaghara nke uto kachasị ukwuu na pọdkastị azụmahịa.
Ọbụghị naanị na oriri na-agbanwe, yabụ omume. Dị ka ndị mmadụ ga-anọdụ na-ele Netflix ọtụtụ awa, anyị na-achọpụta na ndị na-ege anyị ntị ga-ege ntị ọtụtụ awa nke pọdkastị anyị n'otu oge. Gwakọta nke a na ọkọlọtọ ntanetị dị ọhụrụ na ụgbọ ala 2016 nwere ike iri pọdkastị… na ụda ọdịyo ga-apụ dịka anyị ahụtụbeghị mbụ!
na mmepụta n'akụkụ, pọdkastị na-adịkarị mfe. A na-achọbu ya ebe ihe nkiri na-egosi ụda, igwe okwu dị oke ọnụ, na igwekota maka ịdekọ… were zigara ya onye editọ egwu ka ọ na-akụ na tweak. Emechara m ụfọdụ pọdkastị n'okporo ụzọ na a Mbugharị H6 edekọ na set nke Gbanyụọ igwe okwu SM58 - na nghọta doro anya nke pọdkastị dị ịtụnanya. Heck, ị nwere ike ịmalite site na Anchor Podcast ngwa, na ezigbo ekweisi Bluetooth na-arụ ọrụ dị ukwuu.
Ihe oriri mgbasa ozi na-egosi ihe mgbanwe nke teknụzụ na usoro ọhụụ gbanwere n'ụzọ dị egwu. Ngwa ọrụ na-abawanye nke Mobile dị ka 'ihuenyo mbụ,' yana ịrị elu nke ụdị ọdịnaya ndị ọzọ, dị ka pọdkastị na ọdịnaya 'bingeable' site na ọrụ vidiyo na-achọ na-emebi akụkọ ifo na nlebara anya anyị dị mkpụmkpụ. Tom Webster, Onye isi oche nke Strategy nke Edison
Monetization Podcasting: Ọ Na-eme
Mgbe ọtụtụ afọ nke pọdkastị, ana m enweta ezigbo ego site na ụfọdụ ndị nkwado (ekele Kpọsaanụ). N'ihi na pọdkastị m nwere ike ịnweta 10k + na-ege ntị n'ọnwa ole na ole na-abịanụ, ndị mgbasa ozi na-akwụ ọtụtụ narị dollar kwa otu. Nke ahụ nwere ike ọ gaghị ada ka ọtụtụ, mana ọ na - eme ka oge baa uru ịhazi, dekọọ, ma bipụta pọdkastị ahụ. N'adịghị ka ederede na vidiyo, pọdkastị dị mma maka mgbasa ozi n'ihi na ị nwere uche onye na-ege ntị. N'ezie, achọrọ m ijide n'aka na ndị mgbasa ozi m bara uru ma baara ndị na-ege m ntị uru - echere m na nke ahụ bụ isi. Gaghị anụ ka m na-achọ ire matarasị na nke m Ajụjụ ọnụ ahịa ahịa!
Ọ bụrụ na enweghị ndị pọdkastị na-ewu ewu na ụlọ ọrụ gị, nke a bụ oge ịmalite otu! Ihe niile si ebe a!
Tags: 2018nyocha edisonIABAhịa Podcastegwuoomphnielsenọdịnaya pacificPodcast edemedePodcast oriripọdkastịpọdkastịpọdkastị statsPodcast studioPodcastingPodcasting ibuọnụ ọgụgụ Podcastingpwc